HomeWararka CiyaarahaParis Saint-Germain oo Robert Lewandowski Dookha Labaad Marka la eego Erling Braut Haaland
October 18, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga 0
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso Robert Lewandowski laakiin waxay u aragtaa weeraryahanka Bayern Munich dookha labaad hadii la waayo Erling Braut Haaland .
Kylian Mbappe ayaa la filayaa inuu ka tago kooxda reer France midkood bisha Janaayo ama xagaaga dambe, iyadoo kooxda Mauricio Pochettino la rumeysan yahay inay durba tilmaameyso beddelka ku guuleystaha Koobka Adduunka.
Sida laga soo xigtay le10sport , mudnaanta koowaad ee agaasimaha isboortiga PSG waa Haaland, iyadoo la filayo in xiddiga reer Norway uu ka tago Borussia Dortmund inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga dambe.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda Pochettino ay u weecan karto Lewandowski haddii aysan awoodin inay ku guuleystaan ​​tartanka Haaland.
Lewandowski ayaa la rumeysan yahay inuu doonayo inuu koox cusub raadsado xagaaga soo aadan, iyadoo Manchester City iyo Real Madrid ay ka mid yihiin liiska kooxaha la sheegay inay xiiseynayaan saxiixiisa.
Sida ay hadda tahay, Mbappe ayaa bilaash uga tagi kara PSG dhammaadka xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado qandaraaskiisu, laakiin kooxda Ligue 1 ayaa weli ku rajo weyn inay heshiis ka saxiixdo.